အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: စပ်မိစပ်ရာ ဘာဘာညာညာ
... 11:15:00 AM
သူများနိုင်ငံတွေမှာ ပင်လယ်ထဲကို သူတို့နိုင်ငံသားတစ်ယောက် ပြုတ်ကျမျောသွားတာနဲ့ရဟတ်ယဉ်ဆယ်စင်းနဲ့လာကယ်တယ်။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံကတော့..........
ကိုယ်တို.က တော့ ကံတရားကို ယိုးမယ်ဖွဲ.ရတာပ .....
တကယ်ကိုပဲ စိတ်ကုန် စိတ်ပျက်မိပါတယ် ..
ကျနော် အကူအညီတောင်းဖူးတယ်ဗျ။ ပိုက်ဆံတွေ ပိုနေလို့ ဗျာ။ အိမ်က အမေကလည်း ပိုက်ဆံ ထပ်ပို့ရင် အိမ်ပြန်မလာနဲ့တဲ့ ကျနော်လည်း ထားစရာမရှိတာနဲ့ သံရုံးကို တစ်လ ၈၀ သွားသွားပေးထားတာ အခုဆို တော်တော်တောင်များနေပြီ။ :)
“အတ္တာဟိ အတ္တာနော နာထော” လေဗျာ
မိုးခါးရေ မှန်၏ ၊၊ ရွှေတွေတော်ပါတယ်ဆို
ညီငယ်လိန်လိန်ရယ် ဒီအကူအညီများ ကွာ အစ်ကို လည်း ကူညီနိုင်ပါတယ် ၊၊ မြန်မာပြည် ပြန်ခါနီးရင် ပတ်စပိုစ့်မှာ အစ်ကိုရုံးမှာသုံးတဲ့ ရုံးတံဆိပ်ထုပေးလိုက် မယ် P:
ကိုတောင်ငူရေ ဒီလိုနဲ. ကျွန်တော်တို.ပိုပြီး အရည်အသွေး တွေ ပြည့်ဝခဲ့ရပါတယ် ဗျာ
ကျွန်တော် အိန္ဒိယ နယူးဒေလီကို ရောက်ပြီး ၂ ရက် အကြာမှာ ဟိုတယ်ကို ကင်ညာသား တစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်။ ခါးပတ်အိတ်လေးနဲ့ အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုပါ။ လေယာဉ်က သူ့ သေတ္တာတွေကို မှားပြီး သယ်သွားလို့ပါ။
သူက ရောက်တဲ့ ညတွင်းချင်း သံရုံးကို ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ နောက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီမှာ ကင်ညာသံရုံးက အ၀တ်အစားအသစ် သေတ္တာ ၂ လုံး လာပို့ပေးသွားပါတယ်။ သင်တန်းကာလ ၃ လစာ ၀တ်ဖို့အတွက်ပါ။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း စင်ကာပူကိုပဲ ကျောင်းလာတက်တာ ဒီလိုပဲ ပျောက်တာ ၊၊ အဲဒီလို အကြောင်းကြားရမှန်း မသိခဲ့ဘူးဗျာ ၊၊
သံရုံးကို အကြောင်းကြားရင် ပို.များပို.မလား မသိဘူးနော် ( ဘယ်ကိုလဲတေ့ာပြောဘူး P: )
တော်ပါသေးရဲ့ ဒီကောင် အကြောင်းမကြားမိလို. ကျောင်းပြီးသွားတာ PP::
ဒါတွေပြောရင် ဒေါတွေပါ လိမ့်မယ်..။
2 June 2009 at 8:54 PM
ကိုလူပျိုကြီးလို. ခေါ်တော့ဘူးနော် ဟာဟ